Izokhipha icwecwe elisha i-Suga Boyz | News24
Izokhipha icwecwe elisha i-Suga Boyz
isithombe: sithunyelweKwesokunxele uMnuz Njabulo Ngubane ‘Silent Killer’ noMnuz Thokozani Xaba ‘Mc Killer’ abaziwa nge-Suga Boyz.
IQEMBU le-hip hop laseMbali i-Suga Boyz elihlanganise u-‘ Mc Killer’ no-‘ Silent Killer’ lizokhipha icwecwe labo elisihloko sithi I-Weave kababy ngoLwesihlanu mhla ka-1 kuNhlangulana (June) nalapho besebenze khona noBhizer odume ngengoma ethi Gobisiqolo.
UNjabulo Ngubane ‘Silent Killer’ waseMbali BB noThokozani Xaba ‘Mc Killer’ waseMbali Unit 13 nabaduma ngeculo elithi Wadlala ngami ngo-2013 bathi bajabule kakhulu ngaleli cwecwe futhi bayathemba ukuthi umphakathi uzolwamukela ngesasasa elikhulu.
Bekhuluma ne-Echo uMnuz Ngubane uthe inhloso yaleli cwecwe ukuqwashisa abantu ukuba baqaphele ama-weave njengoba amaphara edlangile ephuca abantu bewagqokile.
“Seziningi izigameko sizizwa ngamaphara ephuca abesimame ama-weave abo bewadayise ngemali encane ngoba efuna ukubhema izidakamizwa. Sifuna abantu beqaphele bazi ukuthi lezi zinto ziyenzeka.
“Sifuna bazi nokuthi yiziphi izindawo eziphephile lapho bengawa gqoka khona ama-weave abo. Lezi izinwele zibiza kabi futhi akekho umuntu ongaphatheka kahle uma entshontshelwa into yemali engaka, ngenxa yokuthi akekho umuntu omexwayisile ngalo mkhuba omusha wamaphara,” kubeka yena.
Uphinde waveza ukuthi kubajabulise kakhulu ukuthi bekwazi ithuba lokusebenzisana nomculi ofana noBhizer.
“Lokhu kuyakhombisa ukuthi sesikhulile emculweni. Siyazi ukuthi abantu abaningi basazi njengabantu abagxile kakhulu emculweni we-hip-hop kodwa kule ngoma bazozwa okuhlukile njengoba ihlanganisa negqom.
UBhizer ungumculi wegqom kanti sibone kuyi wona mculo odlisa kakhulu kulesikhathi samanje nesithemba ukuthi uzosisebenzela ekutheni sithole abalandeli abaningi siphinde sikwazi nokufaka labo abathanda uBhizer ukuze bangazizwa bevaleleke ngaphandle.
“Kusithathe cishe amasonto amabili ukuthi sihlanganise konke, futhi sisebenze kahle kakhulu noBhizer. Siyafisa ukuthi siphinde siqhubeke sisebenzisane nabanye abaculi abadumile ukuze sizothuthuka.
“Ukuqopha e-studio okungasona esethu kusivule amehlo kwasikhombisa nokuthi sihamba ngendlela okuyiyona.
“Into eyenzekayo ukuthi thina njengabaculi abasakhula siyaye sizitshele ukuthi laba asebephumelele ingoba basebenzisa imishini emikhulu ukuqopha, kanti cha basebenzisa yona le esiyisebenzisa emalokshini okusho ukuthikumele silinde nje isikhathi sethu siyeza,” kubeka yena.
Bakhipha leli cwecwe nje i-Suga Boyz isanda kukhipha i-album ekuqaleni kwalo nyaka esihloko esithi Last Hope.